काठमाडौँ - फराकिलो कोठामा नाटक चलिरहेको छ । युवा दर्शकमाझ व्याप्त गहिरो सन्नाटाबीच हातमा फाइल बोकेर नाटक हेरिरहेका अधबैँसे टाढैबाट चिनिन्छन् । झरी थामिएपछिको बिहानजस्तै उनका आँखा सुग्घर र तृप्त देखिन्छन् । गर्दनमा चुल्ठो झारेका उनी नाटकका एकएक पात्रमा आफ्नो गहिरो दृष्टि लगाउँछन् । दृश्य वृद्धाश्रमको छ । नाटकमा वृद्धवृद्धा आ–आफ्नै ढंगले संवाद गरिरहेका छन् । हातमा फाइल बोकेका व्यक्ति बीचबीचमा केही टिपिरहन्छन् । नाटक सकिन्छ । कलाकार आफ्ना कपडा बदल्छन् । ‘तिमी गइनौ ?’, फाइल बोक्ने व्यक्ति एक युवतीलाई प्रश्न गर्छन् । युवती पुगेर फर्केको जवाफ फर्काउँछिन् । दृश्य रंगकर्मी सुनील पोखरेलको अनामनगरस्थित ‘ज्ञ’ नाटकघरको हो । ...
भन्छन - मान्छेको मानसिकता उसको विरासतको इतिहास, आफ्नो वर्तमान र उसको सेरोफेरोले उसलाई गर्ने ब्यबहारले तय हुन्छ । उसले समाज समक्ष प्रस्तुत गर्ने ब्यबहार यी तिन चिजको समिश्रण बाट तय हुन्छ । यो एउटा चेन जस्तै हो । जब यो बिचमा कुनै खराबी आउँछ यो फंक्सनलेस बन्न पुग्दछ । यसैको शिकार बनेका छन् नाटकका प्रधान पात्र 'माउजंग बाबु' । राणा शासनका एक विर्तावल माउजंग बाबु बि.सं. २००७ सालमा राणा शासनको च्युत भएसंगै सत्ता र शक्तिको बागडोर राजामा स्थानान्तरण हुन पुग्दछ । सत्ताच्युतसंगै राणाकालिन शासकहरुले राज्य ब्यबस्थाबाट ...
काठमाडौँ - नाट्यकर्मी महासंघ र सांस्कृतिक संस्थानको आयोजनामा अहिले जमल स्थित राष्ट्रिय नाचघरमा नाटक 'माउजंग बाबुसाहेबको कोट' को रिहर्सल भैरहेको छ । भदौ २४ गते देखि मन्चन हुने उक्त नाटकको मुख्य भूमिका नेपाली नाट्य तथा सिने क्षेत्रका परिचित मुहार जे.वि. डिसीले निभाएका छन् । नाटकमा उनका अलावा तुलसा पहाडी, रोहानी लामा, अनिता थापा, दिलिप खड्का, कोपिला थापा लगायतले भूमिका निभाउदै छन् । भदौ २४ गते पछि असोज ५ गतेसम्म राष्ट्रिय नाचघरमा उक्त नाटक हरेक दिन बेलुका ५:३० देखि मन्चन हुनेछ । भवानी भिक्षुद्वारा लिखित उक्त ...
शुक्रबारदेखि अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन डिसीमा ‘नेपाल–अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव’ सुरु हुने भएको छ। महोत्सवमा नेपाली पानारोमाअन्तर्गत नेपाल र नेपाली परिवेशमा बनाइएका नेपाली तथा विदेशी निर्देशकले बनाएका नेपाली फिल्महरुको प्रदर्शन हुनेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय पानोरामातर्फ भने अन्तर्राष्ट्रिय फिल्महरु देखाइने छन्। महोत्सवको उद्घाटन दीपक रौनियार निर्देशित फिल्म ‘सेतो सूर्य’बाट हुनेछ भने चलचित्र महोत्सवको समापन मीन भाम निर्देशित कालो पोथी बाट गरिने छ। महोत्वसमा विभिन्न समयका उत्कृष्ट ठहरिएका नेपाली फिल्महरु जस्तैः नवीन सुब्बा निर्देशित ‘नुमाफुङ’, छिरिङ रितार शेर्पा निर्देशित ‘मुकुण्डो’ ‘लुकिङ ब्याक नेपाल सेक्सन’ शीर्षकअन्तर्गत देखाउन लागिएको फेस्टिभलका निर्देशक ...
काठमाडौँ : ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्डको दोस्रो सस्करण अगष्टमा हुने भएको छ l नेपाल फिल्म सोसाइटी अमेरिकाले नेपाली कलाकारितामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका कलाकार तथा पत्रकारलाई ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड द्वारासम्मान गर्दै आएको छ l यहि आउदो अगष्टमा अमेरिकाको कोलोराडोमा हुन लागेको उक्त ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्डको तयारीको लागि अहिले आयोजक सस्था लागि परेको छ l२०१६ मा पहिलो पटक अमेरिकामा आयोजना भएको अवार्डको ख्याति संगै संसारभरका नेपालीहरुले उक्त ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्डलाइ चासोको साथ महत्व पनि दिएका छन l चाडैनै ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड ...